विरोध स्वरुप कपडा उतारिन यी नायिकाले « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
विरोध स्वरुप कपडा उतारिन यी नायिकाले
एजेन्सी, १८ वैशाख । हिन्दी फिल्म बेगम जानमा एक दृश्य छ, जँहा यूवाहरुको समुहले एक यूवतीलाई अनैतिक कार्य गर्नको लागि लखेट्दै जान्छन् र एक वृद्धा वचाव गर्न बिचमा आएर ती यूवाको सामु मौन विरोध स्वरुप आफ्नो कपडा उतार्छिन । बलात्कार र महिलाप्रति पुरुषको दृष्टिकोणको प्रतिकार स्वरुप नबोलिकनै धेरै बोलेको छ यो दृश्यले । यो त भयो रिलको कुरा, तर रियल लाईफमा पनि यस्तै भएको छ । भारतिय चलचित्रकी एक नायिका सार्वजनिक स्थलमा यौन उत्पीडन विरुद्ध आफ्नो कपडा उतारेकी छिन् । उनी हुन् भारतीय तेलुगू अभिनेत्री श्रीरेड्डी मल्लिडी ।
तेलुगू फिल्म उद्योगमा कथित यौन उत्पीडनबिरुद्ध आफ्नो विरोध जनाउँदै पछिल्लो हप्ता हैदराबादको फिल्म नगरमा मूभी आर्टिस्ट एसोसिएशनका अगाडी श्रीरेड्डीले आफ्नो कपडा उतारेकी थिइन् ।
श्रीरेड्डीका अनुसार आफ्नो कुरा सुनाउन र सरकारसँग आफ्नो मागबारे जवाफ लिन उनीसँग यो मात्र विकल्प बाँकी थियो । उनको भनाई थियो, ‘आफ्नो लडाईंमा म बेसहारा हुँ किनभने मेरो दुःख कसैलाई देखाइदिँदैन । जसको कारण म यत्रो ठूलो कदम उठाउन बाध्य भएँ र सार्वजनिक रुपमा कपडा उतारेँ ।’
त्यसैमा थप्दै अझ उनले प्रश्न गरिन, ‘जब फिल्मी दुनियाँका मानिसहरु मलाई मेरो नग्न तस्विर र भिडियो पठाउन भन्छन् भने म सार्वजनिक रुपमा कपडा किन नउतारुँ ?’
धेरैले उनको यो कदमलाई सस्तो लोकप्रियताको कदम ठानेका छन् । श्रीरेड्डीलाई यदि कुनै समस्या थियो भने किन उनी प्रहरीमा गईनन् उनीहरुको तर्क छ ।
को हुन् श्रीरेड्डी मल्लिडी
श्रीरेड्डीले आफ्नो करियर एक स्थानीय टिभी च्यानलमा प्रस्तोताको रुपमा गरेकी थिइन् । पाँच वर्षपछि उनी फिल्ममा काम गर्न थालिन् । केही तेलुगू चलचित्रमा उनले सानोतिनो भूमिकामा उनी देखिएकी थिइन् ।
तर, यस घटनापछि उनी एकाएक चर्चामा आएकी छिन् । उनले हालसम्म यौनउत्पीडनको कुनै प्रमाण पेश गरेकी छैनन् न त उनी प्रहरीमा उजुरी गर्न चाहन्छिन् ।
के मिडियाले उनलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि उक्साएको हो ?
उनले यो दुवै आरोपको खण्डन गरेकी छिन् ।
‘म तिमीलाई रोल दिन्छु, बदलमा म के पाउँछु’
तेलुगू फिल्म उद्योग यानी टलीवुड हिन्दी र तमिल फिल्म उद्योगपछिको सबैभन्दा ठूलो फिल्म उद्योग हो ।
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्डको वार्षिक रिपोर्टका अनुसार सन् २०१५–१६ मा तेलुगू सिनेमामा २६९ चलचित्र बने ।
‘कास्टिङ काउच’ ठूलो मुद्दा हो तर अकसर यसलाई लुकाइन्छ र फिल्म क्षेत्रका मानिसहरु खुलेर यो विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनन् ।
श्रीरेड्डीको तरिका सही या गलत ?
उनको यो कदमपछि श्रीरेड्डीलाई मुभी आर्टिस्टस एसोसिएशनले प्रतिबन्धित गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष शिवाजी राजाले बिबिसीसँग कुरा गर्दै उनलाई गलत व्यवहारको आधारमा प्रतिबन्ध गरिएको हो । उनको प्रश्न छ, ‘श्रीरेड्डीले प्रहरीमा किन उजुरी गरिनन् ?’ श्रीरेड्डीले प्रचारको लागि बिना कुनै प्रमाण कुरा गरिरहेकी छिन् ।